I-iPhone 7 Plus, umbala omnyama, ne-128 GB, izintandokazi ze-presale | Ngivela kwa-mac
Kuphela amahora ambalwa edlule, kusukela ngehora lesishiyagalombili ekuseni, ukuthi i-iPhone 7 entsha, i-iPhone 7 Plus kanye ne-Apple Watch Series 2 ne-Apple Watch Series 1 athengiswa ezitolo zakwa-Apple zaseSpain. Olayini bebengafani nakwezinye izikhathi. Mhlawumbe ngoba besivele sazi ukuthi amanye amamodeli ngeke atholakale esitokweni. Noma mhlawumbe ngoba izindaba azanele abaningi. Kunoma ikuphi, ngisanda kuqeda isigaba sangaphambi kokuthengisa, sesivele sinesifundo sokuqala esiveza ukuthi iziphi izintandokazi zabasebenzisi ze-Apple flagship entsha.
Njengoba sizobona ngokuningiliziwe ngezansi, inkampani yokuhlaziya I-Slice Intelligence ushicilele umbiko oveza ukuthi, ngesikhathi sesigaba sangaphambi kokuthengisa, abasebenzisi bakhethe i-iPhone 7 Plus kune-iPhone 7, yomibili eqedwe ngombala omnyama (ikakhulukazi matte black) uma kuqhathaniswa nokunye, kanye nomthamo wesitoreji se-buffer esingu-128GB. Ngabe lo mkhuba uzoqhubeka manje njengoba amatheminali amasha esethengiswa ngokusemthethweni?
1 Nginike i-iPhone 7 Plus engu-128GB emnyama
1.1 Okumnyama kuyintandokazi
1.2 Futhi uma sikhuluma ngokugcina ...
Nginike i-iPhone 7 Plus engu-128GB emnyama
I-Slice Intelligence wabelane ngemininingwane emisha ephakamisa ukuthi i-iPhone 7 Plus ithengise kakhulu nge-iPhone 7 e-United States. Lokhu kuzobe kungokokuqala ukuthi i-iPhone enkulu ikhombise ukuthandwa kakhulu kunamamodeli angu-4,7-intshi.njengoba.
Njengakwezinye izikhathi, izibalo eziveziwe zingumphumela wokuhlaziywa kwedatha enikezwe ngamakhasimende angaphansi kwephaneli lale nkampani eyaziwayo yocwaningo.
Imininingwane ikhombisa ukuthi, phakathi namahora okuqala angama-48 wokutholakala, Amaphesenti angama-55 amakhasimende athenge i-iPhone 7 Plus, uma kuqhathaniswa namaphesenti angama-41 wabasebenzisi abake bakhetha i-iPhone 6s Plus, noma amaphesenti angama-35 akhethe i-iPhone 6 Plus. Ngakho-ke, ngokuhamba kwesikhathi, isikrini esikhulu sesithandwa kakhulu. Imodeli engu-5,5-intshi kusuka kulo nyaka iyindlela ekhanga kakhulu ngaphandle kokungabaza, ngoba inamakhamera amabilingenkathi imodeli engu-4,7-intshi igcina ikhamera yelensi eyodwa.
Amaphesenti angama-55,9 wamakhasimende athenge ngaphambilini i-iPhone 7 noma i-iPhone 7 Plus phambilini abethenge okungenani i-iPhone eyodwa phakathi kuka-2014 nanamuhla, ngokusho kuka I-Slice Intelligence. Amaphesenti angama-34 amakhasimende awazange athenge i-smartphone kusukela ngo-2014, ngenkathi abathengi abasele bevela kwa-Samsung, LG naku-Motorola.
Okwamanje, uma kungesikho ukuphela kweSpace Grey kulo nyaka, Okumnyama sekuyimbala entsha ethandwa kakhulu ye-iPhone, ngamaphesenti angama-46 okuthengiswa kwangaphambili. I-jet emnyama noma ecwebezelayo nayo iyindlela ethandwa kakhulu, ekhethwe ngamaphesenti ama-23 wamakhasimende, yize ukunikezwa okulinganiselwe kwalesi siphetho kududule ukuthunyelwa ngoNovemba, amakhasimende amaningi kungenzeka ukuthi akhethe umnyama, igolide, igolide noma isiliva esikhundleni.
Ilandelwa ukuthandwa yimodeli yegolide yama-rose, eyaqala ukwethulwa kuma-iPhone 6s, ngamaphesenti ayi-15. Okulandelayo, ukuqedwa kwegolide ngamaphesenti ayi-9 kanye ne-iPhone 7 ne-7 Plus emhlophe / isiliva (engikuthandayo kuze kube manje), okuhlala ngamaphesenti ayi-8 anesizotha.
Futhi uma sikhuluma ngokugcina ...
Ngesikhathi sokuqaliswa kokugcina kwe-iPhone, ngaphezu kwamaphesenti angama-60 ama-oda wangaphambi kwezinsuku ezimbili zokuqala ayengokhetho lwesitoreji esimaphakathi, ngokusho I-Slice Intelligence. I-iPhone 7 entsha ne-iPhone 7 Plus zilandela lowo mkhuba. I-128GB ithandwa kakhulu ngamaphesenti angama-67kulandele i-256GB ngamaphesenti ayi-19, kuthi i-32GB ngamaphesenti ayi-14.
I-Slice Intelligence ulandele amarisidi kagesi avela kubathengi abasebenzisa i-inthanethi abayizigidi eziyi-4,2 e-US. Lokhu kubikwa ukuthi yiphaneli enkulu kunazo zonke yalolu hlobo ngakho-ke ngenkathi izinombolo zingahluka kancane kwimininingwane esemthethweni, ziyakwenza lokho okusetha umkhuba.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izaziso » I-iPhone 7 Plus, umbala omnyama, ne-128 GB, izintandokazi ze-presale